IRave-efanelekileyo ifanelekile ivela kwii-Oscars 2020 Iikhaphethi ezibomvu
Februwari 9, 2020
Tyena Academy Amabhaso ngowona msitho ophambili waseHollywood kwaye ngokuhlwanje sakhunjuzwa ukuba kutheni. Ii-Oscars ezingama-92 zenzeka eDolby Theatre eLos Angeles, eCalifornia apho ezinye zeenkwenkwezi eziqaqambileyo zeli shishini zaqokelelana zilindele i winins zazo okanye kufutshane ne-win. Ngelixa sinomdla kakhulu kwabo baphumelele amabhaso, asinokwala kwakhona ukuba ikhaphethi ebomvu kulapho yonke imilingo yenzekayo khona, ngobulumko befashoni.
Ikhaphethi ebomvu ye-Oscars 2020 ibiyinto yokugcwala njengoko oosaziwayo baboniswa kwimilo eyahlukeneyo yeengubo ezipeyinta ibali elityebileyo lobuhle, ukuntywila nokuqaqamba okwenzeka ngoku. Ekugqibeleni, yintsimbi eyaphumelela kumlo weemithunzi njengoko abantu abaninzi abadumileyo bekhetha igolide, isilivere kunye neetoni zobhedu.
Nangona imvula idlulayo kwaye yenza umdubuli obomvu wekhaphethi, kwakungekho nto yayimisa ukukhanya kwabo njengoko abadumileyo behamba bekhwela ebomvu. UJanelle Monáe Ngokuqinisekileyo ubiwe umboniso kwisinxibo esimbejembeje sikaRalph Lauren esigqunywe ngokupheleleyo yimikhonto. UCynthia Erivo, kwelinye icala, usinike ukuphefumla komtshato kwiintsuku zesinxibo se-Atelier Verace yengubo kunye noMaria Tash Jewellery.
Kuba sinomdla malunga nesitayile esifanelekileyo se-rave kunye nezinto zonke ezibomvu zekhaphethi, sikhethe obona busuku buhle. Sithembele, bekukho i-toni ye-celebs ezakufuna ukuba zibambe imbonakalo yazo!
Nazi ezona zikhetho zethu zibalaseleyo zokunxiba…
URyan Michelle Bathé
UFatma Al Remaihi
UCynthia Erivo Okufumaneka UJanelle Monae Mindy Kaling I-Molly Sims I-Oscars 2020 I-Oscars 2020 ikhaphethi ebomvu Rebel Wilson Regina King Scarlett Johansson
Uhlobo Rave Februwari 9, 2020